‘ओली सरकारको भ्रष्टाचार र स्वेच्छाकारी प्रवृत्ति रोक्न कांग्रेसले आन्दोलनको उद्घोष गरेको हो’
कोरोना प्रकोपले देश अस्तव्यस्त भएका बेला सरकारले संसद अधिवेशन समय अगावै अन्त्य गर्‍यो। नागरिकको आवाजलाई संसदमा उठान गर्ने बाटो बन्द भयो। त्यसपछि सरकारका अनेक विवादास्पद काम, भ्रष्टाचार र अनियमितताका सवालमा बहस भए पनि सार्थक परिणाम आएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि दुर्व्यवहार र पक्राउ गरी सरकारले सर्वसत्तावादी छविको पुष्टि गर्‍यो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा होमियो। आन्दोलन किन गर्दैछ कांग्रेस? र, आगामी रणनीति के छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक एवं प्रभावशाली नेतृ पुष्पा भुसालसँग नेपाली पब्लिकका लागि आयुश चौलागाईंले गरेको अन्तरवार्ताः
नेपाली कांग्रेसले मंसिर २९ गते (भोलि)का लागि तय गरेको देशव्यापी प्रदर्शनको तयारी कसरी गरिरहेको छ?
–अहिले कांग्रेसले ७७ वटै जिल्लामा सरकारको भ्रष्टाचार, अनियमितता र आर्थिक संकटका कुराहरूका बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने गरी विरोध कार्यक्रम गर्न लागेको हो। तनहुँमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि जुन अभद्र व्यवहार र निषेधको राजनीति गर्ने काम सरकारबाट भयो, त्यसका विरुद्धमा विभिन्न जिल्लामा हाम्रा पदाधिकारीलाई खटाएर विरोधका कार्यक्रम गर्न लागेका हौं। केन्द्रीय सदस्यहरू आवश्यकता अनुसार जिल्लामा सम्बोधन गर्न जानुभएको छ। शुरुआतमा सरकारका गलत कामका बारेमा जनतालाई सचेत गराउन हामी जुटेका हौं। र, वरिष्ठ नेतालाई निषेध गर्ने कामको भत्सर्ना गर्न पनि यो प्रदर्शनका लागि सडकमा उत्रिएका हौं।
कांग्रेसको प्रदर्शनले सरकारलाई सच्चिन र आवश्यक परेमा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले देशव्यापी आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन खोज्नु भएको हो?
–सरकारको गलत क्रियाकलापको प्रत्यक्ष मारमा जनता परेका छन्। कांग्रेसले मात्र सरकारको विरोध गर्न लागेको होइन। गलत कामविरुद्ध जनताको साथ लिनका लागि र सरकारलाई दबाब दिन यो कार्यक्रम गर्न लागेका हौं।
यो प्रदर्शनपछि सरकारले आफ्ना प्रवृत्तिलाई सुधार्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
–सरकारले संविधान विपरीत काम गर्ने, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने, हिंसाका घटना ढाकछोप गर्ने, सुशासनमा संवेदनशील नहुने, मुलुकको समृद्धिका लागि कुनै पनि योजना नल्याउने र अरुलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने कोसिस गरेको प्रष्ट भएको छ। सुशासन र समृद्धि लोकतन्त्रका मुख्य खम्बाहरू हुन्। सरकारले त्यसलाई नै भत्काउने काम गर्‍यो। संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई नै स्वीकार नगर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। हामी जनताले बहुमत दिएर पठाएको पार्टी र सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने चाहन्छौं। तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हासिल भइसकेका राजनीतिक उपलब्धिहरू कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ। त्यसकारण प्राप्त भइसकेका उपलब्धिहरूलाई जोगाउन कांग्रेसले आन्दोलनको उद्घोष गरेको हो। अहिले पनि कांग्रेसले सरकारका गतिविधिहरूको निगरानी गरिरहेको छ। सरकार अहिले पनि गलत कामहरू विरुद्धको आवाज स्वीकार्न तयार भएको महसुस भएको छैन। यस विषयमा जनतालाई जानकारी गरायौं भने कम्तिमा पनि हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू जोगाउन सक्छौं। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले दबाबमूलक आन्दोलनको थालनी गरेको हो।
३ वर्षको अवधिमा आधा दर्जनभन्दा बढी कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको सत्तारुढ पार्टीका कार्यकर्ताबाट हत्या भयो। त्यससँगै कुटपिट र अपहरणसम्मका गतिविधिहरू भएका छन्। तर, किन शीर्ष नेतामाथि आक्रामण भएपछि मात्र कांग्रेसको चेत खुल्यो?
–कुनै पार्टीको वरिष्ठ नेतामाथिको प्रहार भनेको पार्टीमाथिको प्रहार हो। सरकार त्यहाँसम्म पुग्नुले सरकार निरंकुशता र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ। कम्युनिष्ट सरकार लोकतन्त्र स्वीकार गर्न तयार छैन भन्ने बुझिन्छ। ओम्नीदेखि लिएर बालुवाटारसम्मका प्रकरणमा प्रधानमन्त्री स्वयं नै छानवीनका लागिसमेत तयार नहुने, अनियमितता भएको विषयलाई स्वीकार नै नगर्ने र ढाकछोप गर्नतिर लागेपछि हामी आन्दोलित भएका हौं। सरकारले अति गरेपछि नै कांग्रेस सडकमा ओर्लिन बाध्य भएको हो।
अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका महिला हिंसाका घटनाहरूलाई हामीले संसदमा उठाउँदा पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएन। पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई जोगाउनतिर सरकार लाग्ने भएपछि हामीले आवाज उठाएका हौं। प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो कब्जामा राखेर कांग्रेसविरुद्ध लगाउने र दमन गराउने कुराले के देखायो भने बहुदलीय व्यवस्थामा अरु पार्टीलाई स्वीकार गर्न नसक्ने प्रवृति ओली नेतृत्व सरकारको देखियो। अरु पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई झुठा आरोप लगाउने, प्रहरीबाट दमन गराउने आदि जस्ता काम सरकारले गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणलीलाई सरकारले स्वीकार्न नसकेपछि नै हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हौं।
जनतामा छाएको नैराश्यलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसले कस्तो कदम चाल्ने छ अब?
–कांग्रेसले यो एजेण्डालाई गम्भीर रुपमा लिएको छ। सरकारप्रतिको नैराश्यताका कारण गाउँशहरमा कांग्रेसको लहर छाउँदै छ। जनताहरू कांग्रेसप्रति आकर्षित भएका छन्। कम्युनिष्ट पार्टीकै साथीहरू पनि कांग्रेसमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण कांग्रेसले उठाएको मुद्दाहरू सही छन् भन्ने कुरा त कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै रहेका आमनागरिक र शुभचिन्तकहरू नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुले पुष्टि भयो। हामीले अब सरकारले गरेका गतिविधिलाई आगामी महाधिवेहनभन्दा पहिले जनताको माझमा पुर्‍याउने र अधिवेशनमा यसलाई एउटा बलियो एजेण्डाको रुपमा तयार गर्ने तयारीमा छौं। र, त्यो एजेण्डालाई आगामी तीनवटा निर्वाचनमा जनताका माझमा गएर परिवर्तनलाई बचाउन पहल गर्ने छौं। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अब जनताले साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामी संगठनका माध्यमबाट जनतासमझ पुर्‍याउँछौं।
अहिले संसद चलेको छैन। उपसभामुखको निर्वाचन पनि हुन सकेको छैन। संवैधानिक निकायहरूको विषय पनि छँदै छ। यी काममा कांग्रेसको कदम कस्तो हुनुपर्छ? अब कांग्रेसले के गर्छ?
–संसदलाई सरकारले बन्धक बनाउनुको कारण भ्रष्टाचार, अनियमितता र गलत कामविरुद्ध उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भनेर हो। सरकारले संसदमा उठ्ने आवाज छल्न खोजेका हो। सरकारले संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्‍यो भनेर कांग्रेसले दबाब दिइरहेको छ। यति धेरै राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्, जनसरोकारका कुराहरू छन्। भ्रष्टाचार र बेरोजगारीका कुराहरू छन्। यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु परेको छ। त्यसकारण संसद छिटो खोल्नु पर्‍यो र सरकार जवाफदेही छ–छैन उत्तर चाहियो अब। सरकार स्वेच्छाकारी ढंगले चलिरहेको छ। त्यसलाई अंकुश लगाउन र निगरानी गर्न संसदको आवश्यकता छ। नेपाली कांग्रेसले यी मुद्दाहरूलाई आगामि दिनमा अझै सशक्त रुप अगाडि ल्याउने तयारी गरेको छ।
#आन्दोलन #नेपाली_कांग्रेस #पुष्पा_भुसाल
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २९, २०७७ ०२:४१